URichard Stallman, akathembi bitcoin futhi uphakamisa ukusetshenziswa kwe-GNU Taler | Kusuka kuLinux
URichard Stallman, akathembi i-bitcoin futhi uphakamisa ukusetshenziswa kwe-GNU Taler
URichard Stallman waziwa kakhulu ngobushoshovu bakhe ekuhambeni kwesoftware kwamahhala. Futhi yilo mbono kanye owenze uStallman wethula iPhrojekthi ye-GNU, wathola iFree Software Foundation, futhi washicilela iGNU General Public License, phakathi kwamanye amaphrojekthi, ukuthuthukisa umqondo wesoftware yamahhala.
Ngesikhathi sokuxoxwa, UStallman wabelane ngemibono yakhe ngomqondo wama-cryptocurrensets okuxoxwe ngazo kabanzi ngaphakathi komphakathi we-crypto.
Labo kwezobuchwepheshe jikelele bakhulume ngenhloso kahulumeni waseChina ukwethula eyabo imali yasebhange ephakathi yedijithali (CBDC), kanye nezinhlelo zeBhange LaseThailand lokwethula iphrojekthi yokuhlola uhlelo lwayo lokukhokha lwe-CBDC nomhlinzeki omkhulu wezinto zokwakha ezweni.
Kodwa-ke, abanye bakholelwa ukuthi i-CBDC ingaba yindlela yokuqapha ohulumeni yokuqapha imisebenzi yezezimali yezakhamizi zabo.
Futhi kulokhu UStallman usola "ukugadwa ngobushiqela" kuhulumeni waseChina njengoyimbangela yalokhu kungathembani:
“Izinhlelo zokukhokha ezidijithali ziyingozi ngokwemvelo uma zingakhelwanga ukuqinisekisa ubumfihlo. I-China iyisitha sobumfihlo. I-China ikhombisa ukuthi ukubhekwa kobushiqela kunjani. Lokhu kuyingxenye yesizathu sokuthi angizange ngisebenzise ama-cryptocurrensets akhishwe emphakathini. Uma imali yedijithali ikhishwa nguhulumeni, ibizobheka abantu abanjengamakhadi wesikweletu ne-PayPal, futhi zonke lezi ezinye izinhlelo zingabe zingamukeleki ngokuphelele.
Nokho, awuboni ukuphikisana lapho ukhuluma ngomqondo we-cryptocurrency kanye nokuthi ingakhishwa nguhulumeni:
“Ukuphikisana kungumqondo oqonde ngqo. Yini i-cryptocurrency? Ukusetshenziswa kwendlela ethile yezobuchwepheshe. Uma uhulumeni esebenzisa le ndlela, angiboni ukuthi lokhu kungukuphikisana kanjani. Kepha uma uhulumeni emsebenzisa njengenja yokubuka, ngicabanga ukuthi unonya. «
Umsunguli wokunyakaza kwamahhala kwesoftware okwenziwe ukuze achaze umqondo »wemfihlo« lapho ekhuluma ngemfihlo yokubhala ngokufihla:
"Kuyini okuyimfihlo? Ubumfihlo busho ukukwazi ukusho nokwenza izinto ngaphandle kokusetshenziswa yibhizinisi elinamandla ukukuhlasela. Ngokuvamile, izinto ozenzayo akufanele zifakwe ku-database. Izinto ozisho kubantu abambalwa akufanele zifakwe ku-database. Kodwa-ke, ukweqiwa kulo mthetho kwesinye isikhathi kuyafaneleka. Sidinga uhulumeni ukuze akwazi ukuphenya. Kudinga ukuguqulwa okuthile. Sifuna uhulumeni akwazi ukuphenya ngobugebengu abambe nezigebengu. Futhi lokho kungadinga ukuthola imininingwane eyimfihlo kubantu nangabantu ”.
UStallman unikeza enye indlela ye-GNU Taler, yize kungeyona imali yedijithali, kepha iyasho ukuthi ingasetshenziselwa izinkokhelo zedijithali. Ngesikhathi sokuxoxwa, wabuzwa nangolwazi lwakhe nge-cryptocurrency.
Futhi Ubuzwe ukuthi ngabe wake wakwenza noma wakha nge-cryptocurrency efana neBitcoin.
URichard Stallman wathi kuye:
"Impendulo ithi cha. Angenzi noma yiluphi uhlobo lokukhokha kwedijithali futhi isizathu ukuthi izinhlelo ezikhona azihloniphi ubumfihlo bomsebenzisi, kufaka phakathi iBitcoin. Konke okwenziwayo kweBitcoin kuyashicilelwa. Abantu kungenzeka bangazi ukuthi isikhwama sami semali ngesami, kepha uma ngisisebenzise kaningi, bekungatholakala ukuthi ngesami. Abantu abanolwazi olwanele bangakwenza lokhu. Ngincamela ukusebenzisa ukheshi. Futhi le yindlela engizithenga ngayo izinto.
“Ngenza izinto eziningi lapho ngiposa khona lapho izinkampani zazi ukuthi ngingubani. Uma ngikhokha izikweletu zikagesi negesi, ngine-akhawunti nalezi zinkampani futhi kufanele ngiyikhokhe. Bangithumelela ama-invoice egameni lami, ngakho angilahlekelwa yilutho ngokubathumela amasheke egameni lami. Kepha uma ngiya esitolo ngithenga okuthile, isitolo asinalo ilungelo lokwazi ukuthi ngingubani. Futhi ngeke ngikutshele ukuthi ngingubani, ngakho-ke angisebenzisi izinhlelo ezikhona zokukhokha zedijithali.
Ukulandela impendulo yakho, ubuze ngezinguquko ezahlukahlukene zeBitcoin eyenzelwe ubumfihlo. URichard Stallman uphendule wathi:
"Angiqiniseki. Kunoma ikuphi, iProjekthi ye-GNU ithuthukise okuthile okungcono kakhulu, i-GNU Taler. I-GNU Taler akuyona i-cryptocurrency. Akuyona imali nhlobo. Kuyindlela yokukhokha eyenzelwe ukusetshenziselwa ukukhokha okungaziwa ezinkampanini ukuthenga okuthile. «
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » URichard Stallman, akathembi i-bitcoin futhi uphakamisa ukusetshenziswa kwe-GNU Taler
Yenza ucwaningo lwakho nge-Monero (xmr), othandekayo Richard.
Impela le ndodana yep ... I-Hyperledger, uma kunjalo, nge-Hyperledger bazamile ukuthatha i-blockchain, umqondo osho UKWENZA IZIMISELO, okuphikisana kakhulu ne-Hyperledger ne-Stalman
Isimo esidabukisayo ngokuphepha kwe-Intanethi nge-satellite
UPysa, i-static analyzer yePython enikezwe yi-Facebook